Travel To The Black Forest Alemaina | Save A Train
Home > Travel Europe > Travel To The Black Forest Alemaina
Ho an'ireo tsy fantany efa, Black Forest dia faritra be ala any atsimo andrefan'i Alemana. More manokana, Izany dia midika hoe miorina ao amin'ny fanjakan'i Baden-Württemberg, ary mitana anjara manan-danja izany.
Ary, ny faritra eo amin'ny sisin-tanin'i Frantsa ary Soisa, noho izany dia idirana avy any amin'ireo firenena ireo ihany koa.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, Ho isika miresaka bebe kokoa momba ny antony ilaina na tsia ny fitsidihana. tena zava-dehibe, Ho hilaza aminao izahay ny fomba tonga ny Black Forest tany Alemaina lamasinina.
Ny Beauty ny Faritra
Ny hatsaran-tarehy ny faritra dia miankina amin'ny ny maha-, fa koa ny sasany Toerana mahafinaritra tanàna sy vohitra. Ary ny amin'ny natiora anjara, ny faritra dia, tsara, feno ala. Izany anjara no tena fanazavana. Na izany aza, misy kokoa ho azy!
The Black Forest, na Schwarzwald tahaka ny atao amin'ny teny alemaina, manana toerana maro amin'ny Panoramika tsara tarehy hevitra. Izany dia midika hoe feno ihany koa mahatalanjona river lohasaha sy talaky masoandro, tsara tarehy tampon'isa amin'ny maro HAVOANA azonao jerena eto.
Fanampin'izany, maro ireo toerana izay mety ho mahaliana ny olona maro. Afaka mahita tony family toerana, mpivady retreats, sady mampahatahotra ny endriky ny more sahisahy ny olona.
Inona koa, ho hitanao tsara tarehy ny faritra rehetra sy Fairytale-tahaka ny ela taona! Izany zava-misy satria toa mahavariana raha izany talaky masoandro, rainy, ary rehefa misy oram-panala. Azonao jerena tsara izany ao ny ankamaroan'ny sary ny faritra.
Leipzig tany Dresden Lamasinina
Ahoana no Hanohina ny Black Forest lamasinina
Fitoriana ny Black Forest lamasinina dia zavatra azonao atao amin'ny fomba maro. Izany indrindra noho ny toerana misy ny faritra sy ny zava-misy izay manofana mandeha amin'ny alalan'ny Alemaina no mahafinaritra.
Na izany aza, izany tsy ny rehetra. Afaka tonga ny toerana maro ao amin'ny faritra avy amin'ny efa ho anjara Eoropa. Izay no marina indrindra ho an'ny tanàn-dehibe ao amin'ny firenena tahaka an'i Frantsa, Soisa, Aotrisy, Belzika, Italia, sy ny maro hafa.
Raha ny Alemaina, fiaran-dalamby Travel atao mora toy ny orinasa - Deutsche Bahn miasa izany. Various Fiaran-dalamby ICE, EuroCity, CityNight, Intercity, ary TGV-dalana, Mety hitondra anao any amin'ny faritra maro any amin'ny faritra. Afaka mitaingina ny fiaran-dalamby ho any Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, ary Offenburg. Ireo fiaran-dalamby mandeha amin'ny lehibe rehetra tanàna alemà, dia nitsidika ny Black Forest lamasinina ho tsio-drivotra.
Na inona na inona no manapa-kevitra ny hanao, dia tsy handeha diso, satria nitsidika ny Black Forest afaka ny ho mahagaga traikefa. Miteny izany isika, satria ny ankamaroany dia afaka mampiasa ny Toerana mahafinaritra fiaran-dalamby ary nita ny faritra manontolo. Ho hiaina ny zavatra tsara tarehy indrindra ny Black Forest tsy maintsy atolotra. Toerana mahafinaritra ny Black Forest tsipika miasa eo amin'ny lalana Offenburg-Konstanz.
Offenburg ho Freiburg Lamasinina
Stuttgart ho Freiburg Lamasinina
Leipzig any Freiburg Lamasinina
Nuremberg ho Freiburg Lamasinina
Tsidiho ny Black Forest lamasinina Lazaina Rehefa Te!
Araka ny hitanao izao, ny hatsaran-tarehy ny faritra sy ny tsy hanahirana ny fiarandalamby mandeha manao ilay dia mahafinaritra traikefa. Tena manoro hevitra anao izahay hitsidika ny faritra mahagaga indrindra ny Alemaina indray mandeha, fara fahakeliny, eo amin'ny fiainanao! Na izany aza, fa nandeha tokony ho lava ampy ho anao ny mahita ny zava-drehetra fa ny Black Forest tsy maintsy atolotra!
Rehefa manapa-kevitra ny hitondra antsika izany tolotra, dia aza misalasala Mifandraisa Save A Train. Afaka manampy anao mitsidika ny Black Ala lamasinina, ary tena tsy hay hadinoina hahazo traikefa.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fblack-forest-by-train%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#blackforest #blackforestgermany fiarandalamby fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby nankany